Home Wararka Gudaha DEG-DEG:-Shirkii ceergaabo ee beesha warsangali iyo maamulka somaliland oo bur buray iyo...
DEG-DEG:-Shirkii ceergaabo ee beesha warsangali iyo maamulka somaliland oo bur buray iyo sababta.
Shirkii ceergaabo ee beesha warsangali iyo maamulka somaliland oo bur buray iyo sababta.
Shir beesha warsangali uga socday magaalada ceerigaabo oo markii danbe uu soo dhamaaday, maamulka somaliland codsaday wadahadal inay beeshu la gasho ayaa fashilmay.
Shirka ayaa markii hore ku bilaabmay kulan guud oo Muuse biixi iyo waftigiis kasoo qaybgaleen, waxaa markii danbe si hoose ku bilowday wadahadal guddi laba dhinaca loo saaray.
Guddiga beesha warsangali ayaa shirka guddiga ka sheegay inaan beeshu waligeed wax heshiis dawladino la galin Somaliland.
Guddiga beesha warsangali waxay hordhigtay Guddiga Somaliland qodobo culculus oo ay kamid yihiin in Dastuurka SL la furo, taaso maamulka somaliland ka biyo diideen.
Wadahal mudo socday waxay somaliland Waftigeedu Guddiga Beesha Warsangali u sheegeen inay ku bedelayaan Dastuurka furistiisa oo xiligan suutagal ahayn waxii mansab ah iyo mashaariic ah oo deegaanka beeshu baahantay.
Sidoo kale waftiga Somaliland ayaa codsaday in lasoo saaro heshiis is-faham (memorandum of understanding) ayna saxeexan Suldaanka guud ee Beesha Suldaan Siciid Suldaan Cabdisalaan arintaaso Suldaan Siciid genefka ku dhuftay.
Habeenimadii xalay shir ay isimada beeshu oo Suldaan Siciid isugu yeedhay yeesheen waxay isla qaateen inan wax saxiixa aanay bixin oo maamulka Somaliland heshiis lagula galayo balse la sugo dalabkii beesha waxa ay ka qabtaan ooy ugu horeyso furista Dastuurka iyo awood qeybsiga.
Madaxweyne Muuse Biixi iyo weftigiisi ayaa maanta faro madhan kala dhoofay magaalada ceergaabo isagoo wax heshiisa iyo saxiix ka helin shirkii beesha warsangali oo degta dhulka ugu badan Gobolka Sanaag.
Ugu danbeyn muuse biixi ayaa hore tuhun uga qabay beesha warsangali inay daacad ka tahay heshiis ay somaliland la gasho.
Previous articleXog: Diyaarad ka kacday Muqdisho oo loo diiday inay ka degto gobolka Gedo
Next articleMaxey tahay kalmadda halista amni dhalin karta ee ku jirtay wareysigii Fahad Yasin?